I-BWA022-DEMS07-SET-Inkqubo ye-OMG yoLawulo loBungqina beDijithali yeBWC090 kunye neBWC089-iZisombululo ze-OMG
I-BWA022-DEMS07-SET-Inkqubo ye-OMG yoLawulo loBungqina beDijithali yeBWC090 kunye neBWC089
Isoftware yoLawulo lweNkqubo ye-OMG yoBungqina
The Inkqubo ye-OMG yoLawulo loBungqina ilungelelanisa inkqubo yokuqokelela ubungqina ngokudibanisa kunye nokudilika kweedosos zedatha ezikhoyo kujongano olunye. Inika ivenkile yokumisa enye yokuqokelela ubungqina-umphandi akufuneki angene kwiinkqubo ezahlukeneyo okanye ahambe aye kwiindawo ukuze aqokelele ubungqina ngokwakhe.
Akukho nto inokubamba iintloko zeendaba njengeentsebenziswano ezimbi phakathi kwipolisa kunye nelungu loluntu. Kwiminyaka emininzi kakhulu, isiphumo sokusetyenziswa kwamapolisa sixhomekeke ku-"uthe, wathi" ingxoxo. Ngokuveliswa kweekhamera zevidiyo eziphakamileyo eziphezulu, kodwa iifisi zamapolisa zineendlela zokusombulula le ngxabano. Kungcono, banokubathintela ukuba kwenzeke kwindawo yokuqala.
Iintlanga ezijikeleze ilizwe zifuna ukuba amapolisa abo agqoke iikhamera zomzimba, kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Ngeenkhamera zomzimba zirekhode zonke iintetho zokusebenzisana, isebe lamapolisa kunye noluntu olusebenzayo linokukufumanisa oko kwenzekayo kwimeko nganye.
Xa onke amagosa asebupoliseni anxiba ezi ikhamera, inani lezikhalazo zikawonke-wonke liyehla kakhulu, njengokuba inani lamapolisa kufuneka asebenzise amandla. Benza ukuba kubekho ukuphendula okufunekayo kubo bonke abachaphazelekayo ukuba baqonde ukuba konke abakwenzayo kubhalwa kwi-posterity.
I-OMG Digital Providence Management Software [ODEMS]
Onke amasebe anendlela yawo yokwenza izinto, kwaye iitekhnoloji ezintsha akufuneki zikunyanzele ukuba usebenze ngendlela ethile. Nokuba ufuna ukufikelela kwividiyo, gcina idatha okanye ulawule zonke iinkcukacha zendlela esetyenziswa ngayo.
Ukuze iikhamera zibe luncedo, kufuneka zihanjiswe ngesoftware elungileyo lolawulo lwe-digital, olubizwa ngokuba yi-DEMS. Le software isetyenziswe ngeendlela ezininzi ukuqinisekisa ukuba yonke irekhodi yekhamera yomzimba ikhathazwa kwaye igcinwe kakuhle. Kukho amaninzi amanqaku eedatha okufuneka aqoshwe ngokuchanekileyo. Umzekelo, ifayile yethu inga:
-Khangela ukuba leliphi ipolisa elishicilele ukuba yeyiphi ividiyo kwaye yabhalwa ngaliphi ixesha
Gcina imethadatha yayo yonke into erekhodiweyo, enjengokuba ngawaphi amalungu esebe ayibonileyo kwaye nini
-Vumela ukumakisha iividiyo njengobungqina kuphando oluqhubekayo okanye ngenxa yogcino olulula
-Nika igqwetha lesithili sakho kunye nabasebenzi babo ukuba bangene kwaye babukele iividiyo ezibalulekileyo
Izinzuzo zeMveliso yeTracker EMS
Ingaba ungumphathi wamapolisa ufuna izisombululo ezintsha okanye umlawuli we-IT kufuneka azalisekise, isofthiwe yolawulo lobubungqina bedijithali ibalulekile ekwenzeni iikhamera zomzimba zincedo. Ngaphandle kwesi softhiwe, utyalo-mali lwakho kwiimveliso zekhamera eziphezulu ziza kuba yize. Inkqubo Yethu yoLawulo loBungqina ngeNkqubo yoBungqina beDivayili edibeneyo iyingqayizivele kuba ivumela ububini bobubungqina obubonakalayo kunye nobunjitjethi obubonisa lonke utyando lweentambo. Uya kuba nesisombululo sonke-esisodwa sokugcina ubungqina bakho bokugcinwa kunye nokukwazi ukufikelela nanini na xa ufuna.
Ekubeni le yile teknoloji entsha, abathengi banokukhetha kuphela kwi-OMG yeemfuno zabo zekhamera zevidiyo. Ngayo iteknoloji, iyakwazi ukukhawuleza ibe yisikhathi. Emva kokuba iteknoloji ingasayi phezulu-ye-line, uza kufuneka utyalomali imali ekufumaneni iikhamera ezintsha kunye nesofthiwe entsha ukuhamba nehardware entsha.
-Khuphela kunye nokuqinisekiswa kwazo zonke iifayile zedijithali kubandakanya imifanekiso, ividiyo, iaudiyo, kunye nezinye iifayile
Ukulayisha ngokuzenzekelayo kunye nokutshaja
-Khusela ukufikelela kuzo zonke iifayile zedijithali
Ityathanga lokugcina zonke iifayile zedijithali
Iifilitha ezingenamda kunye neefilitha ezikhawulezayo
-Imifanekiso kunye nengxelo yoshicilelo
- Ukhuseleko lomsebenzisi
Unlimited Cima iifayile
-Uthintelo olunamandla lokuthintela iimeko ezibuthathaka neziphezulu
Ukugcina amandla: Hayi, ukuxhasa ikhompyuter, sebenzisa i-hard disk yekhompyuter ukugcina ubungqina
Ujongano lokuFumana: Imicro-USB * 10 amazibuko esemgangathweni
Iqhosha lokutshintsha kwamandla: Iqhosha lomzimba * 1
Isinxibelelanisi se-USB3.0: I-USB3.0 * 1
Isinxibelelanisi soMbane: AC kwi: 220V; I-50Hz ngaphezulu kokukhuselwa kwamandla ombane, ngaphezulu kokhuseleko lwangoku, ngaphezulu kokukhuselwa kwamandla, ukukhuselwa okufutshane kwesekethe
ukunikezwa Amandla: Eyakhelwe-ngaphakathi kwi-12V10A yokuhambisa umbane
Ukutya umbane: ≤120W
Umlingisi opholisayo: Eyakhelwe-ngaphakathi kwi-12v yokupholisa fan * 1
Imilinganiselo (mm): Ubude be-350mmm * Ububanzi be-240mm * Ukuphakama kwe-100mm
Isisindo somzimba: Malunga ne5kg
489 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje